Federaalka iyo Somaliland oo Mar kale wada-hadlaya – Radio Daljir
Oktoobar 7, 2015 5:25 b 0
Arbaco, Oktoobar 07, 2015 (Daljir) — Xukuumadda Fadaraalka Soomaaliya ayaa shaacisay inay dib u bilaamanayaan wadahadaladii u dhexeeyay Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Maamulka Somaaliland.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa sheegay in wada hadalada lagu doonayo sidii markale midnimada Soomaaliya la isugu keeni lahaa, islamarkaana walaalaha Maamulka Somaliland loogu qancin lahaa inay ka laabtaan gooni isutaaga.
Qodobada la rabo in lagu heshiiyo ayuu ku sheegay Raisul wasaare ku-xigaynka inay mid yihiin wada qaybsiga maamulka Maaliyada, wada shaqaynta maxkamadaha, fulinta sharuuc dalka loo dajiyey iyo arrimo kale.
“Wada hadalada dib ayay u bilaami doonaan, waxaan u baahanahay in wada hadalka noqdo mid markale la isu keeno Soomaali weyn, oo aysan noqon mid lagu kala tego” ayuu yiri Ra’iisul wasaare ku-xigeen Dowladda Fadaraalka isagoo aan sheegin xiliga uu furmayo wada hadalka iyo meesha uu ka furmayo.
Marar hore ayuu fashilmay wada hadalka u dhexeeya Dowladda Fadaraalka iyo maamulka Soomaaliland, kuwaas oo laysku afgaran waayey waxyaabaha lagu heshiinayo iyo cida labada dhinac ay usoo xulanayso wada hadalka.